एजेन्सी, मुम्बई, 2018/02/12
फिल्म ‘प्याडम्यान’ रिलिजपछि अब बलिउड स्टार अक्षय कुमारलाई एक अर्को बायोपिक फिल्मको अफर आएको छ । ‘मिल्कम्यान’ नामबाट चर्चित डा. वर्गीस कुरियनको जीवनीमाथी बन्न लागेको फिल्ममा उनलार्ई मुख्य भूमिकाका लागि अफर गरिएको छ ।
एकता कपूरले डा. वर्गीस कुरियनको जीवनीमाथी आधारित किताबको राइट्स किनिसकेकी छिन् । एकता यो फिल्ममा अक्षयलाई खेलाउन चाहिरहेकी छिन् । कुरियनको भूमिकामा अक्षय उचित हुने निर्माताको भनाई छ ।
फिल्मका डाइरेक्टर र एडिटर श्री नारायण सिंहले डा. कुरियको बारेमा बताउँदै भने, ‘उनले आम जनताका लागि सम्मानयोग्य काम गरेका छन् । उनी एक दूरदर्शी सोच्ने विजनेशम्यान थिए । साथै, एक राम्रो व्यक्ति पनि थिए ।’